I-Spotify HiFi enesandi esikumgangatho weCD esiza kumiliselwa ekupheleni konyaka | IPhone iindaba
U-Spotify ubhengeze kule veki ukuba uyakuba nenkonzo "eyongezelelweyo" ebizwa Spotify HiFi. Ngelo gama, awunyanzelekanga ukuba ube nguSherlock Holmes ukufumanisa ukuba kungantoni na. Ukusasaza umculo ngaphandle koxinzelelo, kunye nomgangatho womsindo ogcinwe kwiCD.
Ngokuqinisekileyo esi sibhengezo asizukuzithanda iinkokheli zeApple Park, abathandi abancinci bokufumana ukhuphiswano. Yinto enzima ekufuneka bayilandile. Akukho ngqiqweni ukungabinayo I-Apple Music iHiFi ukwazi ukuyonwabela kwi-AirPods Max ...
IAmazon kunye neTidal Babengabokuqala ukuphakamisa isibhengezo kwaye banikezela kumaqonga abo okusasaza ukhetho lokumamela umculo ngaphandle kokulahleka ngenxa yoxinzelelo, njengaleyo igcinwe kwiCD yentsusa yoqobo.
I-Spotify ayizukushiyeka ngasemva, kwaye ndibhengeze nje kule veki ukuba ngaphambi kokuphela kwalo nyaka izokwazisa i-Spotify HiFi. Ngaba uya kuba ukhetho olubiza kancinci kunale langoku, kodwa ngesandi esinganyanzelekanga, esinomgangatho ophezulu kunye nenkcazo.
esengozini ndiyithumele nje. Utsho ukuba u-Spotify kuvavanya ii-algorithms ezahlukeneyo zokufaka iikhowudi kwi-intanethi ngomgangatho ophezulu wesandi. Kwaye kubonakala ngathi ekugqibeleni bayifumene indlela yokwenza.
Iqonga Tidal Sele iqale uhambo lwayo ngokuthe ngqo ngokunikezela ngenkonzo yayo ngesandi ngaphandle kwelahleko esemgangathweni. Iyazingca ngayo kwaye yingxoxo yakhe yokutsala ababhalisile. Inexabiso 9,99 iiYurophu inyanga.
IAmazon nayo inayo I-Amazon Music HD ngesandi esikumgangatho ophezulu. Inexabiso 14,99 iiYurophu ngenyanga, ngaphezulu kancinci kune-9,99 Euro ngenyanga apho iindleko zenkonzo zinesandi "esiqhelekileyo" sokusasaza esiqhele ukusisebenzisa.
Ngokuqinisekileyo, Spotify HiFi iya kuba yinkonzo ebiza kakhulu kunaleyo sinikwe yona namhlanje. Ukhetho oluya kuthathelwa ingqalelo ngabo bafuna ukumamela umculo ngolona mgangatho uphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Spotify i-HiFi enesandi esikumgangatho weCD oza kuyipapasha kamva kulo nyaka
I-Apple ikhokela i-Samsung kwintengiso ye-smartphone yehlabathi